द्वितीय विश्व युद्ध आधुनिक सिनेमा को अन्त को राउन्ड मितिको पूर्वसन्ध्या मा दर्शक रोचक, योग्य तस्वीर को एक नम्बर प्रदान गर्दछ। सुविधा फिलिम "Batalon" युद्ध समर्पित भए तापनि, तर अन्य - पहिलो विश्व युद्ध। "मृत्यु दस्तों" को काम शीर्षक प्राप्त, अधिक सही उहाँले detachment समर्पित महिला वार्ता अर्थमा characterizes। तिनीहरूले छैनन् कुनै पनि अवरोध डराएका गर्ने "वास्तविक रूसी महिला" को एक प्रकारको एउटा तरिका हो। पनि ती विजेता र मृत्यु पछिको खडा सम्बन्धित छन्।
यो फिल्म, मधुर स्वर इतिहास, व्यक्तिगत दुःखद घटना, महिला को सौन्दर्य, र प्रेम एकताबद्ध। "Batalon" के हो? फिल्म द्वारा सिर्जना सैन्य formations को कथा भन्छ , यो अन्तरिम सरकार को खसेको सोभियत सैनिक आत्मा उठाउनु र कायम राख्न एक व्यर्थमा प्रयास रूपमा। उदाहरणका महिला, यसको सहभागीहरू गरेर, पनि कमजोर सेक्स अगाडि जान सक्षम छ भन्ने तथ्यलाई गर्न alluding, लाज मानिसहरूलाई आंशिक थिए। यो detachment को आयोजक भयो मारिया Bochkareva। उनको छवि पूर्ण रूपमा कुटपिट अभिनेत्री Mariey Aronovoy सैन्य नाटक 2015 "Batalon"। दर्शकहरुको र आलोचकहरु को समीक्षा, साथै फिल्म को इतिहास, यसको अभिनेता र वर्ण को प्रोटोटाइप यो लेखको विषय हुनेछ।
इतिहास र अर्को फिलिम - को दिल मा
यस ब्यान्ड मनपराएका गर्नेहरूलाई, र इतिहास को सबै प्रशंसक इच्छा तस्वीर सिर्जना कसरी उत्सुक थियो। आखिर, formations जस्तै महिला बारेमा "Battalion" फिलिमहरु अघि, यो थिएन। अचम्मको कुरा, विचार को संस्थापक को बारेमा अर्को फिलिम गरे पनि ब्रेस्ट गढ को रक्षा दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा। "Batalon" - पहिचान निर्माता इगोर Ugolnikov "ब्रेस्ट किल्ला" को सिर्जना काम, यो पहिले नै राम्रो नाम हुन परियोजना भविष्य प्रतिनिधित्व गर्दछ। फिल्म स्थानीय फौजलाई हराउँछन् को जटिल स्त्री भाग्य देखाउन योजना छ। यो उद्यम अलिकति बदल छ। प्रमुख क्षण "मृत्यु दस्तों" Marie Botchkareva को गठन र यसको सहभागीहरू को दुर्दशा भन्दा कम थियो।
कूचो लगाउनु नजिक समय प्रीमियर
कम्पनी "Vork कुना", समर्थन Igorya Ugolnikova र Fyodor Bondarchuk संग, राष्ट्रिय सिनेमा एक महत्वपूर्ण आंकडा छ कि चित्रहरु को उत्पादन को लागि लाख $ 10 विनियोजन। यो मतलब एउटा कुरा - साथ ठूलो मात्रा को परिणाम प्रभावशाली भन्दा कम हुनु हुँदैन। छैन यो जस्तै वा, म प्रीमियर देखाउन सकेन। "Batalon" को दाँया मा किराया मा बायाँ fatherland डिफेन्डर दिवस र विजय दिन को उत्सव अघि केही महिना। को रचनाकार डबल उपहार एक प्रकारको। र पहिलो देशहरूमा पाठ्यक्रम फिल्म, इस्पात काजाकिस्तान, बेलारुस र, रूस देखेको छु गर्न। मिन्स्क, सेन्ट पीटर्सबर्ग, मास्को: पूर्व-प्रीमियर देश को धेरै शहर मा स्थान लियो। एक राम्रो क्षण र सम्पूर्ण चालक लागि विशेष महत्त्व रूस को अध्यक्ष संग बैठक थियो। उत्पादकहरु को अनुसार, भ्लादिमिर पुटिन र अधिक महत्वपूर्ण कुरा, यो खुसी थियो अब हेर्न खुसी हुन्छ। मार्च7"Batalon" बेलग्रेड (सर्बिया) र जर्मनी मा फिलिम तिहार मा देखाइएको थियो।
चलचित्र को पहिलो छाप "Batalon"
को प्रीमियर उपस्थित जो दर्शक को समीक्षा, यो बलियो, जो, दुर्भाग्य, समय संग भूल छ, "कथा को कथा" हो भन्नुभयो। यसलाई व्यावहारिक परिचित STEREOTYPES मार्फत अनुशासन कुनै वर्ण छ। त्यसको विपरीत, जसलाई बारेमा न हामी यो नकारात्मक वा सकारात्मक चरित्र छ भनेर निर्धक्क भन्न सक्दैन। थुप्रै तरिकामा तिनीहरूलाई प्रत्येक अप्रत्याशित छ, र अक्सर आशा के थाहा छैन। को narrative यथार्थता र शुद्धता देखाउन प्रेम रेखाहरू समावेश छ। को जोर को मात्रा मा छ - युद्धमा दृश्य धेरै, प्रभावशाली कठिन र गतिशील, मा स्क्रिन राख्न असफल हुन सक्छ जो जस्तो देखिन्छ।
उज्ज्वल स्क्रिन अनुहार
नयाँ ऐतिहासिक फिलिम को सुरूवात धेरै घरेलू तारा समाचार लागि डाली टुकडी सामेल गर्ने इच्छा गर्न पुगे। प्लट केही जवान वर्ण, अझै "वयस्क जीवनको" को सीमा पार गर्ने छैन विशेष गरी बालिका सामेल छन्। धेरै युवा अभिनेत्री कास्टिंग गर्न hurried। तिनीहरूलाई कुनै पनि सकिनँ "Batalon" को ट्रयाक रेकर्ड अप भर्नुहोस्। मारिया Kozhevnikova उत्पादकहरु रोजेको गर्ने भाग्यशाली व्यक्तिहरूलाई बीचमा थियो। त्यो नतालिया Tatisheva, adjutant Botchkareva को छवि गए। युवा सिट्का "Univer" बाट परिचित अभिनेत्री, लामो यसको सानो हावाको हेरोइन Alia outgrown छ। गीतिनाटकहरू देखि कल्पना गर्न - मारिया खुसीसाथ विविध चलचित्रमा अभिनय, भूमिकाको परिवर्तन भयो। उत्तरार्द्ध बीचमा त्यो शानदार "stervochki" विकी प्ले जहाँ "गाढा दुनिया", थियो। उनको Filmography मा "द Kremlin cadets", "Sklifosovsky", "रातो पहाड" र छन् "केवल विवाहित।" किनभने साँच्चै अभिनय उपहार फिल्म "Batalon" मा साहसी महिला मध्ये एक embody एउटा प्रस्ताव थियो। मारिया Kozhevnikova, दुई छोराछोरीलाई एक जवान आमा, दर्शक अनुसार, भूमिका गर्न, जबकि फ्रेम मा बाँकी अविश्वसनीय सुरुचिपूर्ण र स्मरणीय छ accustomed।
फिल्म राम्रो प्राप्त ताकि तपाईं के लाग्छ? निस्सन्देह, किनभने protagonists, के महिला थिए। यो धेरै हदसम्म छ जहाँ सबै शक्ति र साहस मानिस देखाउन डिजाइन अन्य सैन्य चित्रहरू, एक नम्बर देखि यो फिल्म distinguishes। naivety छोएर र "Batalon" भरिएको छ जो शोकमा, दिन। अतिथि दर्शकहरूलाई सबै richness र भइरहेको छ के को को naturalness संग, brilliantly छ, सबै माथि बाहिरबाट देखिने जो चालक र टेप सबै निर्माताहरू, महिला कम गंभीर छैन कथित fragility, हस्तान्तरण भन्छन्। तिनीहरूले कसरी मातृभूमि को संरक्षक हुन सक्छ? तिनीहरूले बलियो-इरादों वर्ण र कामहरू, वरपरको वास्तविकता संग कठोर भित्री battalion जीवन धेरै विपरीत छन्। पूर्ण समय को सारा वातावरण conveys गर्ने "Batalon" अभिनेता, सेना जीवन, एकता र सामूहिक हरर को युद्धभूमिमा doeth कि, एक गो मा, दुई-घण्टा timekeeping बाबजुद देखिन्छ। दर्शक कार्य एक प्रारम्भिक अन्त गर्न ल्याउन, छिटो छ कि regretted। को denouement युद्धमा नतिजा मा दर्शक लिएर, एक रोचक ठाउँमा आउँछ। प्रस्ट छ, यो एक महान् र अपेक्षित हुन लाग्नुभएको थियो। अक्सर foolishly हुन्छ कि वर्ण को मृत्यु, महिला युद्ध लागि तयार थिएनन्, तर अझै पनि बिना पनि युद्धभूमिमा सिपाही खोल्दै, अगाडि गए भन्ने तथ्यलाई जोड शारीरिक फिटनेस को।
Enchanting रूपान्तरण। "Batalon": अभिनेता र भूमिकाको
निस्सन्देह, मरियम Aronov पनि सबैभन्दा उनको प्रशंसक समर्पित पहिले देखेका थिएन जो सबै आफ्नो खेल, हल्लाउँदै। अभिनेत्री लामो छ आफ्नो छवि को नाटकीय सन्दर्भमा ठूलो महसुस। यो स्क्रिन कडी महिला, एक हार्ड कमान्डर र आमा मा देखाए। खेल Aronova प्राकृतिक र भावनात्मक प्राप्त। त्यो शाब्दिक भूमिका बस्थे।
कुनै कम शानदार र साहसी हेरोइन, शक्तिशाली "महिला" प्रिये, म फिलिम "Batalon" मा एक उज्ज्वल महिला चरित्र भएका छन्। अतिथि दर्शकहरूलाई समर्पित अभिनेत्री Janina Malinchik पूर्ण यस्तो असामान्य भूमिका देखाउनुभयो। पछि उनको र वेलेरिया Shkirando तरिका Neklyudova विश्वास टाढा छैन। म यी प्रतिभाशाली Actresses लागि "Batalon" भविष्यमा करियर लागि राम्रो सुरुवात विन्दु हुनेछ, लाग्छ।
दर्शक को भाग अन्तरिम सरकारको परिचित छवि देखिन्थ्यो। घमण्डी Kerensky brilliantly Marat Bashar प्ले। सैन्य नेता र शिक्षक, को Adjutant सामान्य Alekseya Brusilova अभिनेता द्वारा प्ले व्लादिमीर Zaitsev। अलेक्जेन्डर Novoselov Nikolaya Brzhozovskogo, पहिलो विश्व युद्ध सहित धेरै युद्ध, सदस्य मा गरियो।
वास्तविक प्रोटोटाइप को बहुमत प्ले जो अन्य Actresses "Battalion", हुन्: Polinu Dudkinu (Svistunova) अन्ना Kuznetsova (Seraphim) Mila Makarova (Tonya), Irina Rakhmanov (Froska), मारिया Antonova (Thumbelina)।
इतिहास लागि योगदान, दर्शकहरु को मन मा प्रभाव
युद्ध बारे एउटा फिल्म के हुनुपर्छ? क्रूर र दुःखी। यो छैन कि कल्पना, तर वास्तविकता स्क्रिन छवि र समझ को एक भारी धारणा छ।
प्रीमियर ( "Batalon" जारी भएको थियो 20 फरवरी, 2015), धेरै indifferent नछोड। यसलाई हिट र व्यापक स्क्रिनमा एउटा चलचित्र हेर्न (शक्तिशाली युद्धमा दृष्य दिएको, को मात्रा दिन्छु जो,) गर्न असफल भयो गर्नेहरूलाई, तर आशा गर्नुपर्छ-हेर्न "Batalon" घर। यसलाई पूर्ण विगतका युग र सम्भव स्थानान्तरण को वास्तविकता झल्काउँछ - निष्पक्ष, जानाजानी छैन, सिद्ध तथ्य र posterity लागि संरक्षित र वर्तमान दिन गर्न चित्रहरु को निर्माताहरू सहयोग गर्न हुने फाइदा जानकारी आधारित। "Batalon" अभिनेता दुवै लामो ठूलो युद्ध र ठूलो संग्रामहरू जीतेको गर्न थप एक आदर रहनेछ यस महत्वपूर्ण रूसी फिलिम को लागि आफ्नो वर्ण embodied। यो हाम्रो इतिहास, जुन हामीले बिर्सनु हुँदैन छ।
Rustem Pasha। जीवनी। सत्य र कल्पना
पोर्क tapeworm: लक्षण र उपचार
रक्त शर्करा के खाद्य पदार्थ कम। Diabetics लागि आहार
मेरो मनपर्ने घरपालुवा जनावर कुकुर - विशेष गरी मर्मतसम्भार र शिक्षा
कसरी multivarka मा स्ट्रबेरी देखि जाम तयार?
सुन्निएको Nipples - सम्भव कारण
झाडापखाला - फोहोर हात रोग
टिक (काठ): अवलोकन, विशेषताहरु र आवेदन
विरोधी भडकाऊ दबाइ "Niemiec": प्रयोगको लागि निर्देश